Hooyada argagixiye Tarrant iyo gabar la dhalatay oo loola cararay meel aan la garanayn + Sawirrada guriga | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Hooyada argagixiye Tarrant iyo gabar la dhalatay oo loola cararay meel aan...
Hooyada argagixiye Tarrant iyo gabar la dhalatay oo loola cararay meel aan la garanayn + Sawirrada guriga
(Grafton) 16 Maarso 2019 – Hooyada argagixisada masaajidda Christchurch ayaa la rumaysan yahay inay booliisku ku qariyeen meel aan la aqoonin, si looga hor tago wax aarsi ah oo iyada lagula kaco, sida uu faafinayo Daily Mail Australia.
Sharon Tarrant ayaa loola orday meel qarsoodi ah kaddib markii ay waraysteen booliiska la dagaallanka argagixisada ee magaalda Grafton, woqooyiga gobolka New South Wales, habeenkii Jimcaha.
Iyada iyo gabadheeda Lauren ayay booliisku gurigooda ugu tageen, isla markii uu wiilkeeda Brenton Tarrant uu diley 49 qofood oo ku cibaadaysanayay masaajid ku taalla magaalada Christchurch, New Zealand shalay duhurkii.
Reerka ayaa markiiba halhaleel loola orday, iyagoo xita la sheegay inay ka tageen eey yar oo ay korsanayeen.
Sawirka ayeeydii Joyce Tarrant, 94 jir, oo sheegtay inay rumaysan la’dahay waxa dhacay
Previous articleDAAHA GADAASHIISA: Kooxda Inter Milan oo u kala qaybsantay 3 kooxood oo is dagaalsan (Xog hoose)
Next articleMusuq warqadaha ka muuqda oo lagasoo sheegay garoonka dayuuradaha Muqdisho + Sawirro